Baarlamaanka Federaalka oo looga doodayo dhiibitaankii Qalbi-Dhagax • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Baarlamaanka Federaalka oo looga doodayo dhiibitaankii Qalbi-Dhagax
Baarlamaanka Federaalka oo looga doodayo dhiibitaankii Qalbi-Dhagax
September 9, 2017 - By: Mohamed Jeenyo
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya fadhigoodi ugu horeeyey kadib fasaxii ciida Adxaaga.
Fadhiga maanta ayaa looga doodayaa go’aankii Xukuumadda Soomaaliya Itoobiya ugu gacan gelisey Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi-Dhagax oo ay sheegeen in uu ka tirsanaa Jamhadda ONLF.
Qaar kamid ah Xildhibaanada ayaa durba diyaariyey Mooshin ka dhan ah Raysalwasaaraha iyo xukuumadiisa in codka kalsoonida loo qaado, maadaama ay galeen khiyaano oo muwaadin Soomaaliyeed u gacan geliyeen dal aan xuquuqdiisa ilaalineyn.
Xukuumadda Federaalka SOomaaliya ayaa qiratey dhiibitaanka Cabdikariin Qalbi-dhagax waxaana ay ku saleeyeen heshiis ay horey u gashey Dowladdii Xasan Sheekh. Inkasta oo heshiiskaasi ahaa mid ka dhashey colaadii u dhexeysey Beel degta Mudug iyo Galguduud iyo ciidamo ka tirsan deegaanka islamaamulka SOomaalida ee loo yaqaan LIyuu Boolis.
Raysalwasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in heshiiska xukuumaddu cuskatey uu yahay mid aan sal la hayn, heshiis waxa gala ayuu yiri Madaxweynaha, Raysalwasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda, waxaa looga doodaa golaha wasiirada, waxaa la geeyaa baarlamaanka, waxaana saxiixa Madaxweynaha intaasna ma marin heshiisku waxaana galey dad aan meteli karin Dowladda federaalka.
Xildhibaanadu waa kala argti duwan yihiin, waxaa jira kuwo ku taageersan go’aanka Xukuumaddu qaadatey.
Arrinta Qalbi-dhagax ayaa dhici karta in ay galaafato Xukuumadda Raysalwasaare Xasan Cali Kheyre.